Ma Xaalaal Quudataa mise Xaaraan ku Naax? | KEYDMEDIA ONLINE
Ma Xaalaal Quudataa mise Xaaraan ku Naax?
Ayuub A. Aden (Keydmedia) - Cid waliba waa og tahay in TFG-du ayna xalaal ku dhisnayn. Cid waliba waa og tahay in Madaxda TFG-du ayna shacbi soo dooran ee xaal-mastuur lagu soo naqeeyey. Cid walba waa og tahay in Madaxda TFG-du ayna lahayn haybad iyo hoodaarnimo Qaranimo hanan karo.
Cid waliba waa og tahay inay jeebkooda u Shaqaystaan ee ayna danyarta Shacbiga u codayn. Cid walba waa og tahay inay Jeebka ugu jiraan Madaxda dawladaha aynu deriska nahay oo u isticmaala shaabad lagu xalaalaysto wixii iyaga dani ugu jirto.
Lama dhisi doono ciidan difaac Qarameed ama mid nabadsugid ee waxaa la adeegsan doonaa qandaraasle shisheeye ah oo Dhaqaale badan ku qaata hawlaha loo xilsaaro, sida Burcad-badeedda, afduubka iyo Madax furashada la haysteyaasha. Tanu ma ahan talo ay gaareen Madaxda 3-Geeska ah ee waa mid amar lagu siiyo oo laga sixiixi doono.